प्रकाश जंग थापा - | Nagarik News - Nepal Republic Media
प्रकाश जंग थापाका लेखहरु :
एउटी महिला साथीले बेलुकी नौ बजेतिर एउटा सानो सहयोग चाहियो भन्दै फेसबुक म्यासेन्जरमा सन्देश पठाइन् । ती महिला साथी नियमित जसो फेसबुकमा आकर्षक फोटोहरु पोस्ट गर्ने गर्छिन् । त्यस दिन फेसबुकमा फोटो पोस्ट गर्दा के क्याप्सन राख्ने भन्ने दुविधामा रहिछन् ।
प्रकाश जंग थापा २ वैशाख २०७७ मंगलबार २६ मिनेट पाठ
संसारको ९९ प्रतिशत मानिसलाई ज्ञान–मीमांसा/ज्ञान–पद्धति शास्त्रको बारेमा कुनै जानकारी नै छैन । भनाइको तात्पर्य उनीहरुलाई ज्ञानको सिद्धान्त, विश्वासको परिभाषा र कार्यविधिबारे सामान्य ज्ञान पनि छैन । मुख्यतः विश्वास, धारणा, विचार समाज र संस्कृतिबाट आउँछ । हामी जुन समाजमा हुर्केका छौँ, त्यो समाज जागृत छैन । यसको अर्थ हो, हामीले समाजबाट जति पनि विश्वास लिएका छौँ, त्यसले हाम्रो अनुभूति विकृत बनाएको छ । चेतनाको स्तर बढाउन कुनै भूमिका खेलेको छैन र हामी जागृत छैनौँ ।
प्रकाश जंग थापा ३० भाद्र २०७६ सोमबार २७ मिनेट पाठ
सफल जीवनका चार अध्याय
एप्पल कम्पनी उत्कृष्ट ब्राण्ड मध्य एक हो। यसमा कुनै संदेह छैन। यस कम्पनीप्रति आकर्षित नहुने सायदै होलान्। विश्वभरका करोडौं उपभोक्ताहरुको लागि यस कम्पनीको हरेक उत्पादनहरू बहुप्रतिक्षित रहन्छन्। चाहे त्यो जति नै महङ्गो किन नहोस्। उनीहरु यस कम्पनीले दिने सेवा र सुविधा प्रति भावनात्मक रुपमा जोडिएका हुन्छन्।
प्रकाश जंग थापा ७ श्रावण २०७६ मंगलबार २२ मिनेट पाठ
रणनीतिक सोचका खम्बाहरु
रणनीतिक सोच भनेको के? यस प्रकारको सोच राखे के हुन्छ? नराखे के हुन सक्छ? कस्तो परिणाम आइपर्न सक्छ? यसको खम्बाहरु के–के हुन्?
प्रकाश जंग थापा १४ असार २०७६ शनिबार २४ मिनेट पाठ
बुद्ध हिँड्ने बाटो
‘दि अक्स’ अर्थात् बुद्ध बन्नका लागि दश चरणबारे बृहत् वर्णन गरिएको छ। यी चरणहरु ज्ञानोद्दीप्ति प्राप्तिका लागि म्याप हो। कोही व्यक्ति एन्लाइटेन्ड (प्रबुद्ध) भए पनि ज्ञानोद्दीप्तिका अरु धेरै चरणहरु पार गर्न बाँकी रहेको र विनम्र रहन मार्गनिर्देशन दिलाउँछ। यिनै चरणहरु एकएक गरेर संक्षेपमा व्याख्या गरौँ।
प्रकाश जंग थापा २२ जेष्ठ २०७६ बुधबार २१ मिनेट पाठ
आदर्श अभिभावकत्वको कला
बच्चाहरु थरीथरीका हुन्छन्। कोही डेन्डेलिओन जस्ता हुन्छन् त कोही सुनगाभा जस्ता। कोही भने होपफूल मोन्सटर (आशवान राक्षस) हुन्छन्। डेन्डेलिओनहरू खासै सुन्दर फूल होइनन्, ती फूल लचिला हुन्छन्। जस्तोसुकै प्रतिकूल वातावरणमा पनि फस्टाउँछन्।
प्रकाश जंग थापा २१ वैशाख २०७६ शनिबार २४ मिनेट पाठ
सम्बन्धको ब्रेकिङ प्वाइन्ट
मध्यरातको समय फेसबुक म्यासेन्जरमा घण्टी बज्यो। निद्रामै फोनतिर लम्किएर हेरेँ। युकेबाट चुलबुल पाण्डे दिदीको फोन रहेछ। उहाँलाई जिस्काउने मनसायले होइन कि प्रेम व्यक्त गर्ने हिसाबले चुलबुल पाण्डे भन्थ्यौँ हामी।
प्रकाश जंग थापा २८ चैत्र २०७५ बिहीबार २५ मिनेट पाठ
प्रेम के हो ? परिभाषा दिनु त्यति उपयुक्त नहोला। यो त अनुभूत गर्ने विषय हो न कि व्याख्या। यस विषयमा जानकारी नराख्ने, आकर्षित नहुने को होला र ! के बच्चा, के तन्नेरी, के बुढा सबैलाई प्रेम चाहिन्छ। सबै प्रेम अनुभूत गर्न चाहन्छन्, व्यक्त गर्न चाहन्छन्। उनीहरुको प्रेम व्यक्त गर्ने वा अनुभूत गर्ने तरिका फरक हुन आउँछ।
प्रकाश जंग थापा २३ फाल्गुन २०७५ बिहीबार २० मिनेट पाठ
सोसल मिडियामा सम्बन्धको विषयलाई लिएर एक जोडीबीच आदान–प्रदान भएको चिठी निकै भाइरल भएको थियो। श्रीमानले आफ्नो असन्तुष्टि श्रीमतीलाई चिठीमार्फत व्यक्त गरेका थिए। जब मनमा लागेको कुरा फेस टु फेस भन्न सकिँदैन त्यतिबेला चिठीको सहारा लिइन्छ। ती श्रीमान्ले पनि चिठीकै सहायता लिए।
प्रकाश जंग थापा ६ माघ २०७५ आइतबार १८ मिनेट पाठ
प्रकाश जंग थापा २ वैशाख २०७५ आइतबार ८ मिनेट पाठ
प्रकाश जंग थापाका अरु समाचारहरु खोज्नुहोस्